Dareemayaasha Heerkulka ugu Fiican Arduino | Qalabka bilaashka ah
Isticmaalayaasha laylisyada ama isticmaaleyaasha bilaabaya inay bartaan isticmaalka looxyada elektiroonigga ah waxay badanaa bartaan isticmaalka nalalka LED-ka iyo barnaamijyada la xiriira. Nalalka ka dib, sida caadiga ah, isticmaaleyaal badan ayaa bilaaba inay bartaan isticmaalka qalabka dareemayaasha heerkulka.
Marka xiga waxaan ka hadlaynaa dareemayaasha heerkulka ee jira Arduino, qodobadooda wanaagsan, dhibcaha xun ee ay leeyihiin iyo wixii mashaariic ah ee aan si sax ah ula qaban karno.
1 Waa maxay dareeraha heerkulka?
2 Maxay yihiin xulashooyinka aan u haysto golahayga Arduino?
2.1 Dareeraha heerkulka MLX90614ESF
2.2 Thermocouple Nooca-k shidma
2.3 Arduino DHT22 shidma heerkulka
2.4 Arduino TC74 shidma heerkulka
2.5 Arduino LM35 shidma heerkulka
3 Maxay yihiin mashaariicda aan ku abuuri karno dareeraha heerkulka Arduino?
4 Ma lagugula talinayaa inaad u isticmaasho dareeraha heerkulka Arduino?
Waa maxay dareeraha heerkulka?
Dareeraha heerkulka ayaa ah qayb ururinaysa heerkulka iyo / ama huurka dibedda oo u beddelaya calaamado dijitaal ah ama elektaroonig ah oo ay u diraan guddiga korantada sida guddiga Arduino. Waxaa jira noocyo badan oo dareemayaal ah iyo meelo badan. Waxaan haynaa wixii markaa ka dambeeyay dareeraha heerkulka ee hiwaayadda ee aan ka heli karno 2 euro qalabka dareemayaasha heerkulka ee qiimihiisu yahay 200 euro halkii cutub. Farqiga u dhexeeya dareeraha heerkulka jaban iyo dareeraha heerkulka qaaliga ah wuxuu kujiraa waxqabadka ay bixiso.
Xaqiijinta udhaxeysa heerkulka dhabta ah iyo heerkulka dareeraha waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee saameynta ku leh marka ay timaado kala duwanaanshaha; Cunsurka kale ee isbeddelaa waa heerkulka ugu sarreeya iyo kan ugu yar ee ay oggol yihiin, isagoo ah dareeraha heerkulka xirfadleyda ah kan taageera darajooyin badan. Waqtiga jawaab celinta, xasaasiyadda ama miisaanka ayaa ah cunsurro kale oo kala sooca mid ka mid ah dareeraha heerkulka kan kale. Si kastaba xaalku ha ahaadee, dhammaantood waa loo heli karaa mashaariicdeenna oo keliya kharashkooda ayaa xaddidi kara iibsashada mid ama mid kale.
Maxay yihiin xulashooyinka aan u haysto golahayga Arduino?
Hoos waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah dareemayaasha ugu caansan uguna caansan ee aan ka heli karno dukaan kasta oo elektaroniga ah ama dukaamada khadka tooska ah looga helo qiimo yar ama xirmooyin leh dhowr cutub qiime jaban. Iyagu keligood maahan laakiin Haa, waa kuwa ugu caansan uguna caanbaxay Bulshada Arduino, taas oo hubineysa inaan lahaan doono taageero ballaaran oo dareemayaal heerkul kasta ah.
Dareeraha heerkulka MLX90614ESF
In kasta oo aad leedahay magac yar oo qalaad, haddana runta ayaa ah tan Dareeraha heerkulka MLX90614ESF Waa dareeraha heerkulka ee adeegsada iftiinka infrared si uu u cabbiro heerkulka. Dareemahan ayaa markaa u baahan waxay leeyihiin aragti 90º celcelis ahaan heerkulka ay qaadato waxay u diri doontaa iyada oo loo marayo 10-bit signaarka guddiga Arduino. Calaamadda waxaa loo diraa dijitaal iyadoo la raacayo borotokoolka I2C ama waxaan sidoo kale isticmaali karnaa borotokoolka PWM. In kasta oo uu leeyahay tiknoolajiyad casri ah, dareemahan wuxuu leeyahay qiimo aad u hooseeya, waxaan ka heli karnaa dukaamada elektarooniga ah qiyaastii € 13, qiimo jaban haddii aan tixgelinno fursadaha ay bixiyaan.
Thermocouple Nooca-k shidma
Qalabka Thermocouple Type-K waa shidma xirfadle ah oo taageera heerkulka sare. Waxyaabaha ay ka kooban tahay waa mid aad u fudud maadaama ay tahay kaliya labo fiilooyin bir ah oo loo iibiyey beddelle kaas oo ah kan calaamadda u siiya Arduino. Nidaamkani wuxuu sameeyaa kan Nooca-K Sensor-ka Thermocouple karaa qabow heerkulka u dhexeeya -200º C iyo 1350ºC qiyaastii, waxba kuma laha dareemayaasha hiwaayadaha, laakiin sidoo kale waxay ka dhigeysaa dareemahan loogu talagalay mashaariic xirfad leh sida kuleyliyaha, qalabka dhalaalida ama aaladaha kale ee u baahan heerkulka sare.
Arduino DHT22 shidma heerkulka
Dareeraha heerkulka Arduino DHT22 es dareeraha heerkulka dijitaalka ah taasi kaliya ma aruurinayso heerkulka laakiin sidoo kale waxay uruurineysaa qoyaanka deegaanka. Calaamadda waxaa loo diraa Arduino iyada oo loo marayo 16-bit signal dijitaal ah. Heerkulka recoge ninkani wuxuu u dhexeeyaa -40º C iyo 80º C. Qiimaha dareemahan ayaa gaaraya 5,31 euro halkii cutub. Qiimo ka sarreeya kuwa kale ee dareemayaasha ah laakiin qiil looga helayo tayada dareemayaasha oo ka sarreeya dareemayaasha kale.
Arduino TC74 shidma heerkulka
Dareeraha heerkulka Arduino TC74 waa shidma soo saareysa astaamaha dijitaal ahaan Si ka duwan dareemayaasha kale ee ku sii daaya hab analog ah. Dareemuhu wuxuu ku gudbiyaa iyadoo loo marayo calaamadda digital-ka ah ee 8-bit ah. Qiimaha dareemahan ma aha mid aad u hooseeya laakiin ma ahan mid aad u sarreeya, badanaa qiyaastii 5 euro halkii cutub. Isgaarsiinta dareeraha heerkulka Arduino TC74 waxaa lagu sameeyaa iyadoo la adeegsanayo maamuuska I2C. Heerkulka heerkulka uu dareemahan ururiya wuxuu u dhexeeyaa los -40ºC iyo 125ºC.
Arduino LM35 shidma heerkulka
Dareeraha heerkulka Arduino LM35 waa shidma aad u jaban oo loo isticmaalo mashaariicda hiwaayadda. Soo saaraha dareemahan waa analog iyo qiyaasta waxaa si toos ah loogu sameeyaa darajo Celsius. In kasta oo ay tahay inaan dhahno in dareemahan uusan taageerin heerkulka sare. Heerkulka ay qiraysaa wuxuu u dhexeeyaa 2º C iyo 150º C. Tani waxay ka dhigan tahay inaysan soo saari karin heerkulka xun sidaa darteedna ay ku habboon tahay barashada sida loo isticmaalo dareemayaasha heerkulka. Qiimaheeda ayaa la socda, sida aan kari karno hel 10 dareemayaal ah 7 euro (qiyaastii).
Maxay yihiin mashaariicda aan ku abuuri karno dareeraha heerkulka Arduino?
Waxaa jira mashaariic badan oo aan ku qaban karno dareeraha heerkulka iyo guddiga Arduino. Mashruuca ugu aasaasiga ah ee dhammaantood waa in la abuuro heerkulbeeg si dijitaal ah u soo bandhigaya heerkulka. Halkaan ayaan ka abuuri karnaa mashaariic badan oo isku dhafan sida otomaatiyayaal sameeya ficil gaar ah kadib markay gaaraan heerkul cayiman, U dir calaamado gaar ah oo leh heerkul gaar ah ama si fudud u geli dareeraha heerkulka oo ah farsamo nabdoon si aad u demiso hob ama mashiinka haddii ay dhacdo inaad gaarto heerkulka gudaha.
Magaca iyo tirada mashaariicda ee aan ku sameyn karno dareeraha heerkulka ee Arduino waa mid aad u ballaaran, oo aan macno lahayn, badanaa waa mid ka mid ah walxaha ugu horreeya ee uu adeegsade bilowgu badanaa barto. Daaran Tilmaamaha waxaan ka heli karnaa dhowr tusaale oo ku saabsan sida loo adeegsado.
Ma lagugula talinayaa inaad u isticmaasho dareeraha heerkulka Arduino?
Waxaan u maleynayaa in barashada sida loogu isticmaalo dareeraha heerkulka Arduino inay muhiim tahay oo loo baahan yahay. Ma aha oo kaliya in la ogaado oo la isticmaalo dhammaan qalabka Arduino laakiin in la awoodo in la maareeyo xogta heerkulka oo lagu dabaqo barnaamijyada ka shaqeeya Arduino. Laakiin kugula talin maayo in la isticmaalo dareemayaal xirfadlayaal ah, ugu yaraan noocyo horudhac ah iyo horumarinno horudhac ah.
Waxaan u maleynayaa in marka hore lagu talin lahaa u isticmaal dareemayaal hiwaayadda hiwaayaddaha oo mar alla markii wax walba la xakameeyo oo mashruuca ugu dambeeya la abuuro, markaa haddaad isticmaasho dareemayaal xirfad yaqaan ah. Sababta tani waa kharash. Dareeraha heerkulka ayaa dhaawici kara duruufo kala duwan iyo dareemayaasha hiwaayadda waxaa lagu beddeli karaa wax ka yar laba euro. Taabadalkeed, adoo adeegsanaya dareeraha heerkulka xirfadleyda ah wuxuu kubiiri doonaa qiimaha 100.
Wadada buuxda ee maqaalka: Qalabka bilaashka ah » Arduino » Dareeraha heerkulka ee Arduino
Dareemayaal loogu talagalay Arduino, iskudhaf weyn oo loogu talagalay dadka isticmaala layliska